Metallized Alumina Ceramic Ring China Manufacturers & Suppliers & Factory
Metallized Alumina Ceramic Ring - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Metallized Alumina Ceramic Ring)
I-Metallised Aluminium Oxide Ceramic Ring I-aluminium i-Metallised oxide i-ceramic ring yenziwe ngama-alumina oxides ne-min. Ukuhlanzeka okungu-95%, Kungenziwa ukubunjwa ngokucindezela okumile, ukucindezela okushisayo, ukucindezela kwe-ISO. Esikhathini esivamile, kokubili i-molybdenum-manganese ne-Tungsten...
I-Metallised Alumium Oxide Ceramic Circle I-metallization isebenza nge-metallic coating endwangu endaweni ethile yomzimba we-ceramic, noma i-substrate ye-ceramic. I-metallization esemqoka iqukethe i-molybdenum ne-tungsten. .Izici ze-ceramics zensimbi zinezici eziphezulu zokubhonga ngenxa yamapulangwe ethu...